မင်းရဲသိင်္ခသူ ရေငုပ်သင်္ဘော - ဝီကီပီးဒီးယား
မင်းရဲသိင်္ခသူ ရေငုပ်သင်္ဘောသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပထမဦးဆုံး ပိုင်ဆိုင်သည့် ရေငုပ်သင်္ဘောဖြစ်ပြီး ကီလို အတန်းစား ရေငုပ်သင်္ဘော ဖြစ်သည်။ ဤရေငုပ်သင်္ဘောအား အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ဝယ်ယူရရှိထားပြီး မြန်မာ့တပ်မတော် (ရေ) တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။ ၎င်းရေငုပ်သင်္ဘောသည် ရေအနက်ပေ ၈၀၀ကျော် ငုပ်လျှိုးနိုင်ပြီး ရေတပ်သား အင်အား ၅၂ ‌ယောက် လိုက်ပါစီးနင်းနိုင်သည်။ ပင်လယ်ရေအောက်တွင် ၄၅ ရက်ကြာအမှုထမ်းဆောင်နိုင်သည်။
မင်းရဲသိင်္ခသူရေငုပ်သင်္ဘောအား ၇၃နှစ်မြောက်တပ်မတော်ရေနေ့ စစ်ရေယာဉ်များတပ်တော်ဝင်အခမ်းအနားတွင်တွေ့ရပုံ
အမည်: INS Sindhuvir
Commissioned: ၂၆ ဩဂုတ် ၁၉၈၈
အခြေအနေ: မြန်မာ့ရေတပ်သို့ လွှဲပြောင်းပြီး
Commissioned: ၂၄ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၀
အမျိုးအစား: ကီလို အတန်းစား ရေငုပ်သင်္ဘော
2325 tons (ရေပေါ် ပေါ်စဉ်)
3076 tons (ရေအောက်၌ ရှိစဉ်)
အလျား: ၇၂.၆ m (၂၃၈ ft)
ရက်မ: ၉.၉ m (၃၂ ft)
ပေါ်ရန် လိုသောရေအနက်: ၆.၆ m (၂၂ ft)
2 × ၃,၆၅၀ hp (၂,၇၂၀ kW) ဒီဇယ်-လျှပ်စစ် မော်တာများ
1 × ၅,၉၀၀ hp (၄,၄၀၀ kW) မော်တာ
2 × ၂၀၄ hp (၁၅၂ kW) အရံမော်တာများ
1 × ၁၃၀ hp (၉၇ kW) စွမ်းအင်ချွေတာ အမြန်နှုန်းမော်တာ
ရေပေါ် ပေါ်စဉ်; ၁၀ knot (၁၉ kilometres per hour)
လေပိုက်ဖော် ရေအောက် ; ၉ knot (၁၇ kilometres per hour)
ရေအောက်; ၁၇ knot (၃၁ kilometres per hour)
လေပိုက်ဖော် ရေအောက်:၆,၀၀၀ mi (၉,၇၀၀ km) at ၇ kn (၁၃ km/h)
ရေအောက်:၄၀၀ မိုင် (၆၄၀ ကီလိုမီတာ) at ၃ knot (၅.၆ kilometres per hour) [မှတ်စု ၁]
ခံနိင်ရည်အား: သင်္ဘောသား (၅၂)ဦးနှင့် ၄၅ ရက်အထိ
လုပ်ဆောင်နိုင်သော ရေအနက်; ၂၄၀ m (၇၉၀ ft)
အနက်ဆုံး (max); ၃၀၀ m (၉၈၀ ft)
ပြည့်စုံမှု: 52 (incl. 13 Officers)
မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ရေငုပ်သင်္ဘော ပိုင်ဆိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနေမှုသည် ၂၀၀၁ ခုနှစ်ကတည်းကဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်က နိုင်ငံ ၃ နိုင်ငံလောက်နှင့် ညှိနှိုင်းခဲ့သော်လည်း နိုင်ငံတကာ ပိတ်ဆို့မှုများကြောင့် အရာမထင်ခဲ့ချေ။ ယင်းပိတ်ဆို့မှုများကြောင့် ရေငုပ်သင်္ဘော ဝယ်ယူရန်သာမက လေ့ကျင့်ရန်ပင် ခက်ခဲခဲ့သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယ ရေငုပ်သင်္ဘောတစ်စင်း မြန်မာရေပိုင်နက်အတွင်း စစ်ရေးလေ့ကျင့်ရန် ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က မြန်မာ့တပ်မတော်တွင် ရေငုပ်သင်္ဘောမရှိသော်လည်း ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်ဖြင့် ကြိုတင်လေ့ကျင့်ထားသည့် တပ်မတော်သားများကို အဆိုပါ အိန္ဒိယရေငုပ်သင်္ဘောတွင် ပူးပေါင်းပါဝင် လေ့ကျင့်စေ၏။ ထိုစဉ်က ၎င်းအဖွဲ့အား ဦးစီးခေါင်းဆောင်ခဲ့သူမှာ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး မိုးအောင် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ရေငုပ်သင်္ဘော ပညာများနှင့် ပက်သက်၍ အိန္ဒိယအပြင် အခြားတိုင်းပြည်များတွင်လည်း လေ့လာစေခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်း ရေငုပ်သင်္ဘောနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့ကျင့်ရေး အပြည့်အဝပေးနိုင်စေရန်အတွက် အရာရှိစစ်သည်များကို အိန္ဒိယသို့ စေလွှတ်ခဲ့သည်။ မြန်မာ့ တပ်မတော် ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ရုရှားနိုင်ငံသို့ အလည်အပတ်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ရုရှားနိုင်ငံထုတ် ကီလို အတန်းစား ရေငုပ်သင်္ဘော ၂ စင်း ဝယ်ယူရန် စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ ယင်းနောက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ထပ်မံသွားရောက်ခဲ့ပြီး ဂိုအာဆိပ်ကမ်းရှိ ရေငုပ်သင်္ဘောများကိုလေ့လာခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံသို့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်းသွားရောက်လည်ပတ်ကာ ရေငုပ်သင်္ဘောများအား လေ့လာခဲ့ပြန်သေးသည်။ ဤသို့ဖြင့်၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း အိန္ဒိယ နိုင်ငံမှ ကီလို-အတန်းစား ဒီဇယ်လျှပ်စစ် ရေငုပ်သင်္ဘောအား လက်ခံရယူရန် သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သော်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာကပ်ရောဂါကြောင့် နှောင့်နှေးနေခဲ့ရသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ ပင်လယ်ပြင် လက်တွေ့ လေ့ကျင့်ခန်း ဗန္ဓုလ တွင် အများပြည်သူမြင်နိုင်ရန် ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
အဆိုပါ ရေငုပ်သင်္ဘော မင်းရဲသိင်္ခသူသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ အသုံးပြုပြီးဖြစ်သည့် INS Sindhuvir (S58) အမည်ရှိ သင်္ဘောဖြစ်ပြီး ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုထံမှ အိန္ဒိယနိုင်ငံက ၁၉၈၀ နှစ်များအတွင်းက ဝယ်ယူထားခဲ့သည့် ရေငုပ်သင်္ဘော တစ်စင်းဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ကီလို-အတန်းစား ဒီဇယ် လျှပ်စစ် အမျိုးအစား ရေငုပ်သင်္ဘောဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဟိန္ဒူစတန် သင်္ဘောကျင်း၌ အဆင့်မြှင့်တင်ကာ မြန်မာ့တပ်မတော်သို့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ လေ့ကျင့်ရေးများ စတင်ပေးသည်။ ရေအောက်ငုပ်လျှိုး လေ့ကျင့်ခန်းများအား စုစုပေါင်းအကြိမ်ရေ ၁၀၀ကျော်ခန့် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတခွင် ‌လေ့ကျင့်ခဲ့ကြသည်။ ထိုနောက် မိမိတို့ကိုယ်တိုင် မောင်းနှင်နိုင်ရန် လက်နက်များ ပစ်ခတ်နိုင်ရန် လေ့ကျင့်ခဲ့ကြသည်။ မြန်မာ့တပ်မတော်သားများသည် ကိုယ်တိုင်မောင်းနှင်နိုင်ပြီး တော်ပီတိုများ ကိုယ်တိုင် ပစ်လွှတ်နိုင်သည်အထိ အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာအတွင်း အောင်မြင်စွာ လေ့ကျင့်ခဲ့ကြပြီး နောက်ဆုံး၌ မင်းရဲသိင်္ခသူ ရေငုပ်သင်္ဘောအား လွှဲပြောင်းရယူခဲ့ကြသည်။
ထို့နောက် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက် မြန်မာ့တပ်မတော်ရေ ၇၃နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့တွင် မင်းရဲသိင်္ခသူ ရေငုပ်သင်္ဘောနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တည်ဆောက်သည့် ရေငုပ်သင်္ဘောတိုက်ဖျက်ရေးရေယာဉ် ၂ စီး၊ အမြန်သွားတိုက်ခိုက်ရေးရေယာဉ် (ဒုံးပျံ) ၁ စီး၊ တင့်ကားတင်ကမ်းထိုး ရေယာဉ် ၁ စီး၊ ပင်လယ်သွားတွဲဆွဲရေယာဉ် ၂ စီး တပ်တော်ဝင်ခဲ့သည်။
↑ အကွာအဝေးဆိုသည်မှာ ယာဉ်တစ်စီး လောင်စာထပ်မံမဖြည့်ဘဲ ခရီးသွားနိုင်သော အကွာအဝေး
↑ တပ်မတော်က ပထမဆုံးသော ရေငုပ်င်္ဘောကို ထုတ်ဖော်ပြသ | Myanmar NOW
↑ New subs sign of troubles to come?
↑ INS Sindhuvir: With an eye on China, India hands over submarine to Myanmar | India News - Times of India
↑ Pubby၊ Manu။ "Taking it to next level, India readies submarine for Myanmar"၊ The Economic Times၊ 2019-07-30။
↑ မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ရေငုပ်သင်္ဘောအိပ်မက် | The Voice Journal
↑ တပ်မတော်က တိုက်ခိုက်ရေး ရေငုပ်သင်္ဘော မင်းရဲသိင်္ခသူ အားထုတ်ဖော်ပြသ | Eleven Media Group Co., Ltd
↑ “ကျနော်တို့ ရေငုပ်သင်္ဘောက ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ထက် အပြတ်ကို သာပါတယ်”
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မင်းရဲသိင်္ခသူ_ရေငုပ်သင်္ဘော&oldid=699197" မှ ရယူရန်
၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။